Home (2015) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 6.6/10 91376 votes
April Lawrence, April Winchell, Brian Stepanek, Jennifer Lopez, Jim Parsons, Lisa Stewart, Matt Jones, Rihanna, Stephen Kearin, Steve Martin
ကာတှနျးကားဆိုတာ ကွညျ့တဲ့သူတိုငျးကို ပြျောရှငျမှုပေးနိုငျပါတယျ .. ကလေးတှအေတှကျ Target ထားထားတာမို့လို့ ကာတှနျးကားအားလုံးနီးပါးက Happy Ending လေးတှနေဲ့ပါ .. ကာတှနျးကားလေးတှကေ ဝမျးနညျးစရာတှကေို မပြေ့ောကျစနေိုငျပွီး ကွညျနူးပြျောရှငျစရာလေးတှကေို အမွဲယူဆောငျလာပေးနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ …
ကာတှနျးကားကောငျးတဈကားဆိုတာ ပြျောရှငျကွညျနူးမှုအပွငျ ဘဝသငျခနျးစာတှရေော ဝမျးနညျးဝမျးသာရသပေါငျးစုံကိုပါ ပေးနိုငျစှမျးရှိတဲ့ ဇာတျကားတဈကားပါ .. ကလေးတှတေငျမဟုတျပဲ လူငယျတှကွေားထဲထိပါ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ကာတှနျးကားကောငျးတှေ အမြားကွီးပါ .. Finding Nemo, Toy Story, WALL•E, Up, Dispicable Me, Frozen စသညျစသညျဖွငျ့ အမြားကွီးပါ .. ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက Big Hero6အောငျမွငျမှုကို မှတျမိကွဦးမှာပါ .. တဈကားလုံးလညျး ရယျရတယျ .. ဝမျးနညျးရတဲ့အခနျးလေးတှဆေိုလညျး နငျ့နအေောငျ ခံစားတယျ .. သငျခနျးစာတှလေညျး အမြားကွီး ရခဲ့ကွပါတယျ …
အခု Home ဆိုတဲ့ကာတှနျးကားလေးကလညျး အားလုံးရဲ့ရငျထဲကို ရောကျဦးမယျ့ ကာတှနျးကားကောငျးလေးတဈကား ဖွဈလာဦးမယျဆိုတာ ကြှနျတျော ပွောရဲပါတယျ
Boov လို့ ချေါတဲ့ ခွထေောကျ6ခြောငျး, အရပျပုပုနဲ့ ခဈြစရာ ခရမျးရောငျဂွိုဟျသားမြိူးနှယျစုလေးက သူတို့ရဲ့ရနျသူဂွိုဟျသားတှဆေီကနေ အမွဲတမျး ပွေးရှောငျနကွေရတဲ့သူတှပေါ .. နောကျဆုံးမှာ သူတို့ရနျသူ ရှာမတှနေို့ငျလောကျတဲ့ဂွိုဟျ ‘ကမ်ဘာ’ ကို တှသှေ့ားတော့ လူတှကေို အကုနျဖမျးပွီး ကမ်ဘာကို သိမျးပိုကျလိုကျပါတော့တယျ .. Tip လို့ချေါတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျပဲ သူ့ရဲ့ကွောငျလေးနဲ့အတူ တိမျးရှောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ .. တဈခြိနျထဲမှာပဲ Oh လို့ ချေါတဲ့ Boov ဂွိုဟျသားလေးကလညျး သူ ခဏခဏ အမှားလုပျမိပွီး အားလုံးဒုက်ခရောကျကွလှနျးလို့ တဈဂွိုဟျလုံးက သူ့ကို ဖမျးမိနျ့ထုတျထားတာမို့ ရှောငျပွေးနရေသူပါ .. မထငျမှတျပဲ သူတို့2ယောကျ ဆုံတှကွေ့တဲ့အခါမှာ Tip ကလညျး သူ့အမကေို လိုကျရှာဖို့အတှကျ Oh ကလညျး လိုကျဖမျးနတေဲ့သူတှလေကျက လှတျဖို့အတှကျ2ယောကျစလုံး တဈယောကျကိုတဈယောကျ ကူညီရဖို့ အကွောငျးဖနျလာပါတော့တယျ … Tip တဈယောကျ သူ့အမကေို ပွနျတှပေ့ါ့မလား .. Oh ကရော အားလုံးလကျက လှတျအောငျပွေးနိုငျပါ့မလားဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့ကွပါဦးလို့
Tip အဖွဈ Rihanna က အသံသရုပျဆောငျ ပါဝငျထားပွီး Oh အဖွဈကတော့ The Big Bang Theory ထဲက ဟာသသရုပျဆောငျ Jim Parsons က ကွိုးစားထားပါတယျ .. Tip ရဲ့အမအေဖွဈ Jennifer Lopez လညျး ပါပါသေးတယျ .. ဇာတျဝငျတေးလေးတှကေ ဇာတျကားနဲ့ အရမျးလိုကျဖကျလှနျးပါတယျ .. JLo ရဲ့သီခငျြး ‘Feel the Light’ ဆို အခု ကြှနျတေျာ့ရဲ့Fav Song တောငျ ဖွဈသှားပါပွီ.
အားလပျရကျမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရယျခငျြလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ မောငျနှမသူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူတူကွညျ့ဖို့ပဲဖွဈဖွဈ ဒီ Home ဆိုတဲ့ ကာတှနျးကားကောငျးလေးကို ညှနျးပေးပါရစဗြေ
ကာတွန်းကားဆိုတာ ကြည့်တဲ့သူတိုင်းကို ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်ပါတယ် .. ကလေးတွေအတွက် Target ထားထားတာမို့လို့ ကာတွန်းကားအားလုံးနီးပါးက Happy Ending လေးတွေနဲ့ပါ .. ကာတွန်းကားလေးတွေက ဝမ်းနည်းစရာတွေကို မေ့ပျောက်စေနိုင်ပြီး ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာလေးတွေကို အမြဲယူဆောင်လာပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် …
ကာတွန်းကားကောင်းတစ်ကားဆိုတာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုအပြင် ဘဝသင်ခန်းစာတွေရော ဝမ်းနည်းဝမ်းသာရသပေါင်းစုံကိုပါ ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ .. ကလေးတွေတင်မဟုတ်ပဲ လူငယ်တွေကြားထဲထိပါ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကာတွန်းကားကောင်းတွေ အများကြီးပါ .. Finding Nemo, Toy Story, WALL•E, Up, Dispicable Me, Frozen စသည်စသည်ဖြင့် အများကြီးပါ .. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Big Hero6အောင်မြင်မှုကို မှတ်မိကြဦးမှာပါ .. တစ်ကားလုံးလည်း ရယ်ရတယ် .. ဝမ်းနည်းရတဲ့အခန်းလေးတွေဆိုလည်း နင့်နေအောင် ခံစားတယ် .. သင်ခန်းစာတွေလည်း အများကြီး ရခဲ့ကြပါတယ် …
အခု Home ဆိုတဲ့ကာတွန်းကားလေးကလည်း အားလုံးရဲ့ရင်ထဲကို ရောက်ဦးမယ့် ကာတွန်းကားကောင်းလေးတစ်ကား ဖြစ်လာဦးမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောရဲပါတယ်
Boov လို့ ခေါ်တဲ့ ခြေထောက်6ချောင်း, အရပ်ပုပုနဲ့ ချစ်စရာ ခရမ်းရောင်ဂြိုဟ်သားမျိူးနွယ်စုလေးက သူတို့ရဲ့ရန်သူဂြိုဟ်သားတွေဆီကနေ အမြဲတမ်း ပြေးရှောင်နေကြရတဲ့သူတွေပါ .. နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ရန်သူ ရှာမတွေ့နိုင်လောက်တဲ့ဂြိုဟ် ‘ကမ္ဘာ’ ကို တွေ့သွားတော့ လူတွေကို အကုန်ဖမ်းပြီး ကမ္ဘာကို သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ် .. Tip လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပဲ သူ့ရဲ့ကြောင်လေးနဲ့အတူ တိမ်းရှောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် .. တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ Oh လို့ ခေါ်တဲ့ Boov ဂြိုဟ်သားလေးကလည်း သူ ခဏခဏ အမှားလုပ်မိပြီး အားလုံးဒုက္ခရောက်ကြလွန်းလို့ တစ်ဂြိုဟ်လုံးက သူ့ကို ဖမ်းမိန့်ထုတ်ထားတာမို့ ရှောင်ပြေးနေရသူပါ .. မထင်မှတ်ပဲ သူတို့2ယောက် ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါမှာ Tip ကလည်း သူ့အမေကို လိုက်ရှာဖို့အတွက် Oh ကလည်း လိုက်ဖမ်းနေတဲ့သူတွေလက်က လွတ်ဖို့အတွက်2ယောက်စလုံး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကူညီရဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ် … Tip တစ်ယောက် သူ့အမေကို ပြန်တွေ့ပါ့မလား .. Oh ကရော အားလုံးလက်က လွတ်အောင်ပြေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ကြပါဦးလို့
Tip အဖြစ် Rihanna က အသံသရုပ်ဆောင် ပါဝင်ထားပြီး Oh အဖြစ်ကတော့ The Big Bang Theory ထဲက ဟာသသရုပ်ဆောင် Jim Parsons က ကြိုးစားထားပါတယ် .. Tip ရဲ့အမေအဖြစ် Jennifer Lopez လည်း ပါပါသေးတယ် .. ဇာတ်ဝင်တေးလေးတွေက ဇာတ်ကားနဲ့ အရမ်းလိုက်ဖက်လွန်းပါတယ် .. JLo ရဲ့သီချင်း ‘Feel the Light’ ဆို အခု ကျွန်တော့်ရဲ့Fav Song တောင် ဖြစ်သွားပါပြီ.
အားလပ်ရက်မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရယ်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မောင်နှမသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ Home ဆိုတဲ့ ကာတွန်းကားကောင်းလေးကို ညွှန်းပေးပါရစေဗျ
April Lawrence Josh LaBrot Tim Johnson
Option 1 storage.msubmovie.com 444 MB SD (480p)
Option2server.mfile.cloud 444 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 444 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 444 MB SD (480p)
Option5server.mfile.cloud 1 GB HD (1080p)
Option6sharer.pw 1 GB HD (1080p)
Option7yuudrive.me 1 GB HD (1080p)
Option 8 storage.msubmovie.com 1 GB HD (1080p)
Option9storage.msubmovie.com 2.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 10 sharer.pw 2.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 11 server.mfile.cloud 2.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 12 yuudrive.me 2.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Klaus (2019) 2019
The Lion King (1994) 1994